Maitiro ekunzwisisa kana mumwe munhu akatisora ​​kubva kumaikorofoni (PC uye smartphone) smartphone Emulator.online ▷ 🥇
Kuvanzika kwakanaka kwave kuramba kuchinetsa kuwana, kunyanya kana isu takakomberedzwa nemidziyo yemagetsi inokwanisa kutora chero nguva zvese zvatinotaura kana manzwi anoburitswa nharaunda yatiri kugara kana kushanda. Kana isu tichinyanya kunetseka nezve kuvanzika kwedu uye tisingade kunzwikwa kana kutisora ​​kuburikidza nemakrofoni yePC yedu kana smartphone, mune ino gwara tinokuratidza kuziva sei kana mumwe munhu ari kutisora ​​kuburikidza nemakrofoni, tichiita cheki dzese dzakadikanwa pane edu Windows 10 PC, paMacs edu kana paMacBooks, pane edu Android mafoni kana mapiritsi uye nePhones / iPads.
Pakupera kwecheki Tichaona kuti hatina "spy" application kana maapplication anoshandisa maikorofoni mvumo yekuwana pasina mvumo yedu. (kana pamwe vakawana kubvumidzwa kwedu pataive tichikurumidza, tichitora mukana wepamusoro pedu).
VERENGA ZVIMWE: Dzivirira webcam yako yePC uye maikorofoni kuti usazotariswa
Maitiro ekuona kushandisa maikorofoni
Makomputa ese emazuva ano nemidziyo yemagetsi zvinopa sarudzo kuti utarise kana mumwe munhu ari kutisora ​​kuburikidza nemakrofoni: mune iriko mamiriro ezvinhu, zvakaoma kusora maikorofoni pasina kubatana kushoma kwevashandisi (ndiani anofanirwa kuisa kunyorera kana kubaya pane chakanangana chinongedzo kutanga kusora) kana pasina matekiniki epamberi ekupaza (zvakafanira kupfuura madhiraivhi anoitwa neanoshanda masystem). Izvi zvese zvinoshanda kusvikira tataura nezvazvo tambo yezvakatipoteredzaMuzviitiko izvi nzira dzekushora vanhu dzakasiyana zvikuru uye dzinoshandiswa nemapurisa nekuraira kwevatongi kuti vasore vanofungidzirwa.
Maitiro ekutarisa maikorofoni mukati Windows 10
In Windows 10 isu tinokwanisa kudzora kuti ndeapi maapplication uye zvirongwa zvinokwanisa kuwana iyo webcam maikorofoni kana ((mamwe maikorofoni akabatana) nekuvhura iyo Start menyu muzasi kuruboshwe, nekudzvanya pa Configurationskudzvanya mumenyu Intimidad uye kuvhura menyu Microphone.
Kufambisa muhwindo isu tichakwanisa kuona mvumo yekupinda maikorofoni zvese zvekushandisa zvakadzvanywa kubva kuMicrosoft Store uye nezvirongwa zvechinyakare; Muchiitiko chekutanga, tinogona kudzima mukana wekuwana maikorofoni nekungovhara bhatani riri padyo nezita rekushandisa, nepo muchiitiko chetsika zvirongwa isu tichafanirwa kuvhura iyo purogiramu yacho pachayo uye nekuchinja kumisikidzwa kunoenderana nemakrofoni. Kana tichida tora zvakavanzika zvega uye siya mukana wekutora maikorofoni chete kune "zvakachengeteka" kunyorera, isu tinokurudzira kuti iwe udzivise switch iripedyo neasina kunyanya kunyorera uye uninstall zvirongwa zvinofungidzirwa kana kuti hatizive mabviro. Kudzamisa chinhu ichi tinogona kuverenga gwara redu Maitiro ekubvisa mapurogiramu nemaoko pasina matanho kana zvikanganiso (Windows).
VERENGA ZVIMWE: Spy paPC uye ona mashandisiro anoita vamwe
Maitiro ekutarisa maikorofoni paMac
Kunyangwe muhurongwa hwekushandisa hweMac neMacBooks, ndiko kuti, macOS, tinogona kutarisa kana mumwe munhu ari kutisora ​​kuburikidza nemakrofoni zvakananga kubva kumagadzirirwo. Kuenderera mberi tinoshandura Mac yedu, tinodzvanya icon yeakarumwa Apple muchikamu chepamusoro kuruboshwe, tinovhura menyu Zvido zvemaitirotinya icon Kuchengetedza uye kuvanzika, sarudza iyo tab Intimidad uye pakupedzisira ngatiendei kumenyu Microphone.
Muhwindo tichaona zvese zvinoshandiswa uye zvirongwa zvakakumbira kupinda maikorofoni. Kana isu tikawana chirongwa kana chishandiso chatisingazive mabviro kana icho chisingafanirwe kunge chiripo, tinogona kubvisa mucherechedzo uri padyo nezita rawo uye, kana zvazivikanwa, tinogona zvakare kuenderera nekuisunungura nekuvhura application. Discoverernekudzvanya pamenyu Applications kuruboshwe, kutsvaga spy app uye, nekudzvanya kurudyi pairi, enderera nekudzima nekutsimbirira Enda kumarara.
Maitiro ekutarisa maikorofoni pane Android
Android smartphones uye mahwendefa anowanzo kuve ari akareruka zvishandiso ekushora kubvira iyo inoshanda sisitimu haisi nguva dzose kusvika pari zvino Uye, zvichipiwa kushandiswa kwayo kwakawanda, havazi vese vanonyatso tarisa kana akaisirwa maapplication ari kushora maikorofoni. Kuti utarise maficha ane mvumo yekuwana maikorofoni yechishandiso chedu, vhura application Configurations, ngatiendei kumenyu Kuvanzika -> Mvumo manejimendi kana mune menyu Chengetedzo -> Mvumo uye pakupedzisira pinda mumenyu Microphone.
Pachiratidziro chinovhura, tichaona zvese zvinoshandiswa zvakakumbira kupinda maikorofoni kana zvine mvumo asi zvisati "zvatora mukana". Kana tikacherekedza chero chishamiso chishamiso kana kuti isu tisingarangarire kuti takaiisa, isu tinoenderera nekubvisa maikorofoni activation (ingobaya bhatani padhuze nezita rekunyorera) uye nekukasira kusunungura chishandiso chinonyumwira, kuti tirege kuzotevera kumisikidza. Panyaya iyi tinogona kuverenga gwara redu Uninstall Android maapplication zvizere, kunyangwe zvese kamwechete.
Kana isu tichida kuve neruzivo rwekuona rwezvishandiso zvinowana maikorofoni, kunyangwe isu tisingashandise zvinoshandiswa zvinonyatsoshandisa maikorofoni, tinokurudzira kuti iwe uise iyo yemahara Access Dots application, iyo inopa diki inopenya nzvimbo iri kumusoro kurudyi kona. pese panoshanda kana chirongwa chichiwana maikorofoni uye kamera.
VERENGA ZVIMWE: Tarisa / spy kune mumwe munhu foni (Android)
Maitiro ekutarisa maikorofoni pane iPhone / iPad
Pane iPhone nePadad, nekuuya kwe iOS 14, mhinduro yekuona pamusoro pekuwana kamera kana maikorofoni yakawedzerwa: mune idzi kesi diki orenji, tsvuku kana girini dot ichaonekwa kumusoro kwekurudyi, kuti iwe ugone kuziva nekukasira kana mumwe munhu ari kutisora ​​isu kuburikidza nemakrofoni.
Pamusoro peichi ongororo yekukasira, tinogona kugara tichidzora mashandisiro ayo anowana maikorofoni pane Apple zvishandiso nekuvhura application. Configurations, nekudzvanya mumenu Intimidad, uye pachangu kuongorora maapplication anowana maikorofoni, achiremadza iwo atisingazive kana tisati tamboisa. Kuwedzera zvakanyanya kuvanzika paunenge uchishandisa iPhone, tinokukoka iwe kuti uverenge iro gwara Zvirongwa zvekuvanzika pa iPhone zvichaitwa kuti zvidzivirirwe.
VERENGA ZVIMWE: Maitiro ekutsvaira pane iyo iPhone
Kusora maikorofoni ndicho chimwe chezvinangwa zvikuru zvevabiridzi, vasori kana matikitivha, uye nekuda kweichi chikonzero masisitimu anoshanda ave achinyanya kusarudza kana zvasvika pakupa mvumo iyi. Zvinogara zvirinani kubvunza mamenu uye mashandisirwo anoonekwa pamusoro, kugara uchiziva kana mumwe munhu ari kutisora ​​kuburikidza nemakrofoni, pamwe kutora ruzivo rwemunhu kana zvakavanzika zveindasitiri.
Kana isu tichitya kuve nesora rekushandisa pafoni, tinotarisa kuvapo kwechero chemaapplication anoonekwa mumaraini edu. Iwo akanakisa ekunyorera kunosora nhare mbozha (Android uye iPhone) mi Chakavanzika mumiririri Anwendung Android kusora, chamber nzvimbo, mameseji uye zvakawanda.
Kana, pane kudaro, tichitya kuti kushora maikorofoni kunoitwa kuburikidza nemavirusi eApple, tinokurudzira kuti uverenge chinyorwa Tsvaga uye bvisa spyware kana malware pane Android.
Tsvaga nyaya neSPID: maitiro ekuzvigadzirisa
Maitiro ekutarisa kana iyo APK application iri hutachiona
Tsvaga kana kamera yako kana kamera yewebhu yakabiwa uye kusora pane
Maitiro ekukumbira uye kuwana iyo SPID
Maitiro ekutarisa kana mumwe munhu akashandisa yangu smartphone
Chii chinonzi malware uye chine njodzi zvakadii?
Zvirongwa zvekuchengetedza Microsoft zveWindows 10 uye 7
Ungavharira sei kupinda kune saiti dzevanhu vakuru kubva kuPC, Mac, smartphones uye mahwendefa
Gadzira mapepa akasarudzika, akasimba uye otomatiki mu Chrome
Maitiro ekudzima marekodhi ezwi kubva kuGoogle uye Google Assistant
Maitiro ekuita sei webcam webhu kana uchitarisa paPC zvoga